Kedu ka m ga-esi nwetaghachi ozi Telegram - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 13/06/2022 20:17 | Aplicaciones
Eji m n'aka na o nweburu gi agbanweela ekwentị gị, ị nweghị nkwado ndabere na mpaghara, ọ bụghị naanị mkparịta ụka nke nkata Telegram gị efuola, mana faịlụ niile. kere òkè na ha. Ọtụtụ mgbe, anyị anaghị enye ya ihe kacha mkpa, ma mgbe mkparịta ụka ndị a gụnyere ọrụ ma ọ bụ data nkeonwe ma ọ bụ akwụkwọ, ihe na-agbagwoju anya.
Echegbula onwe gị, anyị nọ ebe a iji nyere gị aka na nsogbu a. Anyị ga-enye gị usoro usoro na ndụmọdụ ndị ị ga-eso ka ị nwee ike nwetaghachi ozi na akaụntụ Telegram gị, yana data dị mkpa na akwụkwọ.
Ọ bụrụ na n'aka nke ọzọ, ọ bụ gị bụ onye na-ehichapụ mkparịta ụka ndị mmadụ n'otu n'otu na ngwa ma ugbu a ịchọrọ ị nwetaghachi ha, ị ga-enwekwa ike ime ya. Telegram, na-enye gị ohere ihichapụ ozi kpamkpam ma ọ bụ akụkọ nkata na-ahapụghị akara. Ọbụna ozi ndị a anyị họọrọ ka ihichapụ gị ga-enwe ike ị nwetaghachi ha. Nọrọ na anyị ga-akọwa otú.
1 Kedu ihe bụ ngwa Telegram?
2 Otu esi enwetaghachi ozi Telegram
2.1 gbanyụọ bọtịnụ
2.2 echekwara ozi na Telegram
2.3 Lelee cache nke ngwaọrụ gị
3 Otu esi echekwa Telegram
Kedu ihe bụ ngwa Telegram?
Telegram, ọ bụ a Ngwa ozi ngwa ngwa dị maka ngwaọrụ dị iche iche dị ka Windows, MacOs na Linux, na-echefughị ​​Android na IOS. Ọ dị maka ngwaọrụ niile anyị na-eji kwa ụbọchị. Enwere ndị na-atụnyere ngwa a na WhatsApp, n'ihi myirịta ya na na ha nwere otu ebumnuche.
Ihe dị iche na nke ọzọ bụ na Telegram anaghị achọ ngwaọrụ mkpanaaka maka ọrụ ya. N'ihi nke a, a na-achịkwa nzuzo nke ndị ọrụ ya niile. Ọzọkwa, isi ihe dị mma bụ nke ahụ A na-echekwa ozi a na-ekerịta na mkparịta ụka na sava Telegram na ọ bụghị na ngwaọrụ.
Otu esi enwetaghachi ozi Telegram
N'akụkụ a nke ịchọta onwe gị, ị ga-enwe ike ịchọta usoro dị iche iche nke ị ga-esi na ya nweta ya weghachite mkparịta ụka na faịlụ Telegram ehichapụ ma ọ bụ furu efu.
Ngwa Telegram, na-enye gị ohere imegharị ihe ị ehichapụrụ, ụma ma ọ bụ n'amaghị ama. Buru n'uche na ị ga-eme usoro a n'ime obere oge enwere ike mgbe ehichapụrụ ozi na mkparịta ụka.
Mgbe ị na-eme mkpebi ihichapụ nkata kpamkpam, ị ga-ahụ a nhọrọ nwere ohere ịmegharị ihe ahụ naanị sekọnd ole na ole. Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ mweghachi ahụ, ị ​​ga-enwe ike iweghachite ihe niile na sekọnd, ozi na faịlụ n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ị nwere ike ime usoro a naanị n'ime oge nke ngwa ahụ gosipụtara na ị kwuru na ọ ga-ekwe omume na ala ihuenyo ahụ, ị nwere atụmatụ oge nke gburugburu 5 sekọnd.
Ọ bụrụ na ihichapụ ozi n'ime nkata otu onye, ​​​​ị ga-enwe obere ngwọta. N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ị dị njikere iwepu ihe na ngwa, nke a ọ ga-ajụ gị ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ ọdịnaya dị otú ahụ, Ọ bụrụ otú ahụ, naanị ị ga-anabata ma chere ka ewepụ ya.
echekwara ozi na Telegram
N'ezie, n'ihe karịrị otu oge ị echekwala ozi n'amaghị ya. Ngwa izi ozi a, O nwere folda arụnyere n'ime ebe a na-echekwa ozi ndị ị chekwabere yana nke ị nwere ike iji n'oge ọ bụla.
Ọtụtụ ndị ọrụ Telegram amaghị maka nchekwa nzuzo a ma kwenye na ozi ha efuola. Ọ dịghị mkpa ka ichegbu onwe ọzọ, ndị ozi na-efunari, ma a na-echekwa ma ị ga-enwe ike ịchọta ha, ugbu a anyị na-agwa gị otú ị nwere ike naghachi ha.
Iji nweta ha, ị ga-emeperịrị ngwa izi ozi. Ọzọ, gaa n'elu aka ekpe nke ihuenyo, ebe ị ga-abanye na profaịlụ gị. Họrọ aha na nọmba gị, hụ aha njirimara gị na ngwa. N'ime akara ngosi iko na-eto eto nke na-egosi na ihuenyo nkata, dee aha njirimara na ozugbo, Telegram, na-egosi gị nchekwa ozi echekwara.
Lelee cache nke ngwaọrụ gị
Ọ bụrụ na ị furu efu ma ọ bụ ihichapụ faịlụ, ma ọ bụ multimedia ma ọ bụ ederede, ma ịchọrọ iweghachi ya, ị ga-agbaso usoro ndị a. Nke mbụ, ị ga-agakwuru onye njikwa faili nke ngwaọrụ mkpanaka gị. Chọọ folda n'okpuru aha ngwaọrụ gị, ọ bụrụ na ọ bụ Android, nchekwa ga-enwe otu aha.
Ozugbo ịchọtara ya, họrọ ya, nweta ya na ọdịnaya ya. N'ime, ị nwere ike ịhụ nchekwa dị iche iche ebe echekwara cache niile nke ngwa arụnyere na ngwaọrụ gị. Chọta ebe nchekwa ahụ n'okpuru aha Telegram, wee nweta faịlụ niile ekesara na ngwa ahụ wee chọta nke ihichapụ n'amaghị ama.
Otu esi echekwa Telegram
Nke a na-azọpụta usoro bụ dịtụ iche na ihe anyị na-eji na-ahụ na WhatsApp. Ngwa Telegram nwere a ngwá ọrụ nke ga-eme ka anyị chekwaa data niile nke mkparịta ụka anyị na kọmputa anyị.
Iji nwee ike ibupụ nkata anyị mepere na Telegram na PC, ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na ị ga-enwerịrị. arụnyere ngwa na desktọpụ nke ngwaọrụ. Ozugbo i tinyechara ya, naanị ị nwere banye na ekwentị mkpanaaka gị wee tinye koodu nke ezigara na otu ngwaọrụ gị, na-abụkarị mkpanaka.
Mgbe imepere ngwa na kọmputa gị, ị ga-pịa menu nke na-egosi na elu aka ekpe nke ihuenyo, mara dị ka hamburger menu. Ozugbo ịpịrị, a na-egosipụta menu ma ị ga-achọ nhọrọ ntọala.
Mgbe ịpị ntọala, windo mmapụta na-egosi na nhọrọ dị iche iche. N'ime nhọrọ ndị ahụ niile, ị ga-ahọrọ nke dị elu. Ọzọ, a ọhụrụ ihuenyo ga-emeghe ebe ị ga-ahọrọ "Export data si Telegram" nhọrọ, n'ime "Data na nchekwa" ngalaba.
Dị ka oge ụfọdụ na-eme mgbe ị na-eme nkwado ndabere, Ị ga-akpachara anya na nhọrọ niile ewepụtara gị., ebe ọ bụ na dabere ma ị họrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ, akwụkwọ a ga-abụ karịa ma ọ bụ na-erughị ezu.
Dịka ị na-ahụ na onyonyo a, enwere ohere ịzọpụta dị iche iche, naanị nkata nzuzo ma ọ bụ nkeonwe, otu nzuzo ma ọ bụ ọha, nha faịlụ, wdg. Mgbe ị nwere ihe niile na oyiri agwụla, a ga-echekwa faịlụ niile na nchekwa nbudata n'okpuru aha "Telegram Desktop".
Cheta na ọ bụrụ na enweghị nkwado ndabere na mpaghara, ị gaghị enwe ike weghachite mkparịta ụka, ma ọ bụ ozi ehichapụ ma ọ bụ faịlụ multimedia. Anyị na-atụ anya na ndụmọdụ ndị a bụ isi maka otu esi enwetaghachi ozi Telegram ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ na n'oge ọ bụla nke ọ bụla n'ime ikpe ndị a na-emeso emetere gị, ị maralarị otu esi eme ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Aplicaciones » Kedu ka m ga-esi nwetaghachi ozi Telegram
Bots egwu kacha mma maka Discord